Toeram-piasana tsara indrindra hanofana
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Toeram-piasana tsara indrindra hanofana
Nandritra ireo fotoan'ny fisalasalana ny indostrian'ny trano sy tany lasa tsy azo antoka ihany koa. Noho izany dia tsy misy dikany ny fampiasam-bola amin'ny sehatr'asa na koa mieritreritra ny hividy birao ho anao. Izany no mahatonga ny orinasa lehibe rehetra miova manomboka amin'ny fividianana ny toeran'ny birao mankany amin'ny fanofana toerana birao. Io no fomba tsara indrindra hampihenan'ny orinasa ny sandany ary mbola hahazo vokatra mitovy na tsara kokoa aza. Voaporofo izao fa ny fanofana biraon'ny birao dia tsara lavitra noho ny fividianana toerana birao ho anao.
Avelao izahay hahatakatra sy hijery ny antony tsara kokoa amin'ny manofa birao noho ny mividy birao ho anao:
1: Tsy misy fampiasam-bola lehibe: Matetika, raha mila mividy birao ianao dia tsy maintsy mampiasa vola be amin'ny fananana hahazoana toerana birao. Ary koa, betsaka ny vintana fa mbola tsy hahazo ilay karazana toerana tadiavinao ho an'ny biraonao ianao. Noho izany dia handany vola be ianao amin'ny fanavaozana ny toeran'ny birao mba hanaovana azy ho toy ilay tadiavinao. Azo antoka fa manampy be dia be amin'ny orinasa izany. Etsy ankilany misy birao manofa izay hahitanao ireo sarany rehetra ireo. Tsy mila manao fampiasam-bola lehibe ianao satria ny tokony hataonao dia ny mandoa hofan-trano iray volana, ary mety hofan-trano mialoha na vola azo antoka 1-3 volana fanampiny.
2: Tsy misy fandaniana fanampiny: Raha mividy habaka birao ho an'ny tenanao ianao dia tsy maintsy hampiasa vola amin'ny fanaka, ny fitaovana elektronika ary koa ireo fampitaovana maro hafa ao amin'ny biraonao. Etsy ankilany dia misy ireto birao manofa amin'izay ianao vao tokony hamindra ny ekipanao. Izy io dia satria ireo toerana misy ny birao ireo dia efa manana ireo zavatra rehetra ireo amin'ny alalanao hampiasainao. Tsy mila mividy zavatra fanampiny ianao alohan'ny hifindranao amin'ireo birao nohofana ireo.
3: Tsy misy fandaniana amin'ny fikojakojana fanampiny: Ny iray amin'ireo fandaniana lehibe tsy maintsy haloanao raha sanatria ka mividy birao ianao dia ny tsy maintsy handanianao vola be amin'ny fikolokoloana azy. Handray olona manokana hikarakara ny birao ianao. Fa amin'ireto birao manofa tsy mila miahiahy momba ireo zavatra rehetra ireo ianao. Matetika, ny fikolokoloana dia karakarain'ny olona manome ny birao amin'ny hofan-trano. Noho izany dia hanangona vola sy hery be ianao amin'ny tsy hidiranao ao fikojakojana ny biraonao.
Heveriko fa ireo antony ireo dia ampy anao hahatonga ny sainao fa na te-hividy birao ianao na te-hanofa birao.